Isimo sezulu esibandayo siyingozi kakhulu kunesimo sezulu esishisayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla, ngeSonto ngoMeyi 31, siphetha inyanga bese singena ngokugcwele esikhathini sehlobo. Kunjalo, yize kusasele izinsuku ezingaba ngu-21 kuze kufike ihlobo, iqiniso yilokho kwezinye izindawo zezwe i-thermometer iqala ukukhuphuka, efinyelela emazingeni okushisa ajwayelekile ezinyangeni ezishisayo.
Ngalesi sikhathi kufika ubungozi bokuhlushwa ukushisa, kepha ... Ubuwazi ukuthi isimo sezulu esibandayo siyingozi kakhulu kunokushisa? Ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i »The Lancet» lufinyelele kulesi siphetho. Qhubeka ufunde ukuze wazi okwengeziwe.
Kuvela ukuthi sivame ukukholelwa ukuthi isimo sezulu esibi kakhulu sinesibalo senani eliphakeme kakhulu lokufa, kusukela izinqubomgomo zamanje zezempilo zigxile ekuvikeleni impilo yethu ngesikhathi sasehlobo, njengoba kuchazwe nguDkt Gasparini, waseLondon School of Hygiene and Tropical Medicine (etholakala e-UK).
UGasparini nethimba lakhe bahlaziya ukufa kwabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-74 phakathi kuka-1985 no-2012 emazweni ayi-13 ngokuhlukahluka kakhulu kwesimo sezulu, kusuka kwamakhaza kuya ezindaweni ezishisayo. Ngenxa yalokhu, kuye kwacatshangelwa okuguquguqukayo okuningana, okufana ne- izinga lokushisa eliphakathi nendawo noma i umswakama, futhi ngaleyo ndlela sikwazi ukubala izinga lokushisa elifanele (okungukuthi, amazinga okushisa amnandi emzimbeni womuntu) wokufa. Ukufa ngenxa yamazinga okushisa angahambi kahle (okushisa kakhulu) kwendawo ngayinye ephenyiwe nakho kwalinganiswa.
Ngakho-ke, bakuqinisekisile lokho cishe i-7% yabo bonke ukufa kubangelwe amazinga okushisa angalingani kahle, okuyi-7% yazo zonke ngenxa yamazinga okushisa abandayo. Bangu-29% kuphela abantu abashonile okuthiwa babangelwa ukushisa.
Le datha ingasiza wandise uhlelo lokuvikela ezempilo lomphakathi, hhayi kuphela ehlobo, kodwa ikakhulukazi nasebusika.
Lokho kusho, sebenzisa i-sunscreen phakathi nezinyanga ezishisa kakhulu, futhi… ungakhohlwa ukukuvikela kusukela emakhazeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isimo sezulu esibandayo siyingozi kakhulu kunesimo sezulu esifudumele